असार २९, २०७८	0
प्रवाहित भयो मेरो कोठामा
गाढा सुगन्ध गुलाफहरूको । त्यसपछि आइन्
एक वसन्त कुमारी
बाक्लो रातो स्कर्ट लगाएर ।
असार २८, २०७८	0
By वामदेव क्षेत्री घिमिरे
डा. बाबुराम भट्टराईले भेटेर ३५ हजार रुपैयाँ दिनुभएछ, त्यसबाहेक पार्टीका कसैले पनि भेटेनछन् र सहयोग पनि गरेनछन् । त्यतिबेला मैले पार्टीभित्रको अन्तरसंघर्ष, आग्रह–पूर्वाग्रह सम्झिएँ । एकछिन आँखा बन्द गरेँ । आँखा अगाडि भयंकर अँध्यारो मात्र छायो । मनमा पनि अन्तरसंघर्ष हुन थाल्यो । ओहो ! पार्टीप्रति सर्मपण कतै व्यर्थ त होइन ? मनमा आशंकाका अनेक तरेली छाए । तर आत्मबल बलियो बनाएँ र र परिवारलाई विचलित नहुनु भनेर सम्झाएँ ।
असार २७, २०७८	0
असार २६, २०७८	0
By नीरा शर्मा
रोक्न नसकेपछि आफूलाई
पहरा, कन्दरा र बगर छिचोल्दै
चट्टानसँग मितेरी लाउँदै
रातको अंगालोबाट फुत्केर
आइपुगेको छु म
असार २५, २०७८	0
किताबै जलाउनुपर्ने कविता !
प्रमुख जिल्ला अधिकारीले भन्नुभयो, ‘सर, आज ढिला भयो । ११ कक्षाको कोर्समा एउटा कविता रहेछ । त्यसैलाई लिएर केही राजनीतिक दल किताब जलाउने भन्न थाले । त्यसैले लफडा भयो ।’ मैले कुन कविता भनेर सोधेँ। ‘हर्कबहादुर भन्ने रैछ’, उहाँले भन्नुभयो । किन जलाउने भनेका रहेछन् भनेर सोधेँ। झण्डाको विरोध गरिएकाले रहेछ भनेर भन्नुभयो ।
असार २४, २०७८	0
विद्यार्थीलाई कसरी सिर्जनशील बनाउने ?
हामी पहिले जादु, टुनामुना जस्ता कथा पनि पढ्थ्यौं । त्यसले हामीलाई कल्पनाशील बनाउथ्यो भने अरु किताबबो भोक पनि जगाउँथ्यो । तर अहिले चाहिं सहरका नानीहरु कार्टुन हेर्छन् । त्यसले कल्पनाशीलता ध्वस्त गरिरहेको छ । हुन त पश्चिमाहरुले भिज्युअलबाट आकर्षित गरेर सिर्जनशील बनाउन खोजेका हुन् । तर नेपाली विद्यार्थीको सन्दर्भमा त्यसले सही काम गरिरहेको छैन । किनभने पश्चिमाले बनाएका कार्टुनको परिवेश अर्कै छ । नेपालको समाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक स्थिति अर्कै छ ।
असार २३, २०७८	1
लेखक वा किताब लोकप्रिय हुनका लागि लेखकको पनि भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । जस्तो, शरदचन्द्रले ‘देवदास’ लेखेपछि खुब हिट भए । सबैले उनको किताब पढ्थे । उनी भने रविन्द्रनाथ टैगोर पढ्थे । त्यतिबेला रविन्द्रनाथ टैगोरका किताब त्यति बिक्दैनथे । शरदचन्द्रले रविन्द्रनाथका किताबका पंक्ति नै उल्लेख गरेर चर्चा गरिदिन्थे ।
असार २२, २०७८	0
हामीले लोकगीतलाई प्रेम, मनोरञ्जन र रमाइलो बिषयमा मात्रैमा सीमित गरेका थियौं । अथवा भनौं कान्छा र कान्छीको ठट्टा, साईंला र साईंलीको कथा, च्याङ्बा र च्याङ्माको कुरामै मात्रै सीमित राखेका थियौँ । तर यसले हाम्रो लोप हुन लागेको ऐतिहासिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, आर्थिक बिषयका विभिन्न पाटालाई पनि समेट्छ भन्ने कुरालाई त्यति ध्यान दिइएको थिएन । त्यतिमात्रै होइन, लोकगीतमा समाजको प्रचलन, आस्था पनि प्रतिविम्बित हुने गर्दछ ।
असार २१, २०७८	0
नेकपा (माओवादी) र सरकारको वार्ता तय भयो । त्यसपछि पार्टीका नेताहरूको संवाद र भेटघाट बाक्लियो । पार्टीको माग रहेछ– केन्द्रीय सदस्यलाई छाडेपछि मात्र वार्तामा बस्ने । मलाई जेलमा भेट्न जाँदा डा. बाबुराम भट्टराईले भन्नुभएको थियो– तपाईं छुट्दै हुनुहुन्छ । तर त्यस कुराको हल्ला गरिएन ।